सन्दिपको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै सन्दिप आवद्ध टिम मोन्ट्रेल टाइगर्सको पहिलो जित : सन्दिपले कति रन दिएर कति विकेट लिए त ? - Eall Nepal
सन्दिपको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै सन्दिप आवद्ध टिम मोन्ट्रेल टाइगर्सको पहिलो जित : सन्दिपले कति रन दिएर कति विकेट लिए त ?
रोयल्स्लाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा टाइर्गसका पिटर सिड्डीलेको उत्कृष्ट बलिङ रह्यो । उनले ३ ओभर १ बल बलिङ गर्दै महत्वपूर्ण ४ विकेट लिन सफल भए । यस्तै, लाथिस मालिङ्गा र केभरकोस्टन कोपरले दुइदुई र सुनिल नारायनले १ विकेट लिन सफल भए । चौथो खेल जित्दै पुछारबाट सन्दिप आवद्ध टिम पाँचौ स्थानमा पुग्न सफल भएको छ ।
यस्तो छ लिगको तालिका
कैलाश मानसरोवर गएका ८ भारतीय तीर्थयात्रीको मृत्यु,